Fikarohana momba ny firaisana Raharaha fanalefahana an'i Charles Darwin | Marshall Medoff: Mpahay siansa Genius Mihoatra ny Hatrany Lavan'ny Roa - Fikarohana Reincarnation
Raharaha fanalefaka indray an'i Charles Darwin | Marshall Medoff: Mpahay siansa Genius manerana ny roa taona
Talenta momba ny fiainana taloha: tsy misy fiofanana ara-tsiansa, Marshall Medoff dia lasa prodigy biolojia olom-pirenena zokiolona
ao amin'ny andiany fandaharana amin'ny fahitalavitra CBS 60 Minutes, Naseho Marshall Medoff, izay manana tantara tsy dia mahazatra. Medoff dia profesora amin'ny toekarena tao amin'ny University State California, Long Beach ary tao amin'ny University of California, Irvine. Efa nisotro ronono izy tamin'ny fampianarana tamin'ny 2012 raha 67 taona.
Nifindra tany Massachusetts i Medoff avy eo, izay niverenany ho eo amin'ny natiora. Medoff dia nandany ny androny mba hisaintsaina ao amin'ny Walden Pond, toerana iray nampalaza ny mpanoratra sy ny filozofa Henry David Thoreau, izay naka aingam-panahy avy amin'ny hazandrano Walden sy farihy.
Tamin'ny faha-70 taonany dia nanjary variana tamin'ny "famonjena izao tontolo izao" i Medoff tamin'ny fahavoazana sy ny tontolo iainana. Na dia tsy nahazo fiofanana ara-tsiansa aza izy, dia nanao asa fitoriana i Medoff fa hanova fomba hanovana ny zavamaniry tsy azo hanina ho mpamono fitaterana tontolo iainana, zava-bita izay tsy mbola tratran'ny siansa goavana indrindra manerantany.
Medoff dia nitoka-monina tao amin'ny garazy izay nipetraka tao amin'ny trano fitahirizana ary nandalina momba ny siansa momba ny zavamaniry biolojika 12 ora isan'andro. Nanomboka hevitra nanenitra izy, anisan'izany ny fizotran'ireo molekiola mamboly misaraka elektronika accelerators. Amin'izany fomba izany, ny fako fambolena, toy ny katsaka katsaka, dia azo ampiasaina amin'ny famokarana solika maitso.
Ny mpampiasa vola dia voatosika amin'ny fizotran'ny elektronika Medoff hanapotehana ny molekiola mamboly mba hamoronana solika, ary koa ny plodika biodegradable. Vetivety izy dia afaka nanokatra pasika fitiliana 45 tapitrisa dolara, ary foibem-panamboarana ihany koa. Nomeny anarana ny mpiara-miasa aminy Xyleco.
Medoff dia nohajaina ho mpamolavola revolisionera mitovitovy amin'ny Einstein na i Thomas Edison.
Fiainana iray taloha amin'ny Marshall Medoff amin'ny maha Charles Darwin
Ara-dalàna raha nanontany tena izy hoe iza no Medoff taloha. Kevin Ryerson dia haino aman-jery trance izay mitondra fanahy antsoina hoe Ahtun Re, izay nampiseho ny fahaizana nanao ny lalao tamin'ny fiainany tamin'ny fotoana marina. Tamin'ny fivoriana niarahana tamin'i Kevin, i Ahtun Re dia nilaza tamiko fa tao amin'ny fiandohana taloha dia i Medoff dia mpandala voajanahary iray izay nianatra ny samoina, na dia tsy nilaza zavatra hafa voafaritra kokoa aza i Ahtun Re.
Tao anatin'ny andro taorian'izay dia nieritreritra izay nolazain'i Ahtun Re aho ary toa tadidiko fa nianatra ny kalalao i Charles Darwin. Eny tokoa Darwin dia nandinika ny Xanthopam, karazana karazany satroka.
Nahatsikaritra aho fa misy fitoviana ara-batana eo anelanelan'i Darwin sy Medoff ary tamin'ny fivoriana manaraka niaraka tamin'i Kevin Ryerson, Ahtun Re dia nanamafy fa Marshall Medoff no reincarnation an'ny Charles Darwin.
Darwin dia manam-pahaizana siantifika iray izay nametraka ny teoria momba ny fivoaran'ny karazana ary heverina ho iray amin'ireo siantifika lehibe indrindra amin'ny tantara.
Talenta fiainana taloha ho an'ny fahazoana ireo rafitra mifamatotra
Na dia vao jerena fotsiny aza dia toa tsy mitovy ny fandraisana anjaran'i Darwin ho an'ny biolojia sy ny asa voalohany nataon'i Medoff teo amin'ny lafiny toekarena. Ny anarana iraisana eo amin'ny fivoaran'ny karazana sy ny toekarena dia ny fampidiran'izy ireo rafitra sarotra ifandraisana. Toa ny fanahin'i Darwin | Medhoff dia manana fanomezana ho an'ny fahatakarana ireo rafitra mifandray.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Mitovy ny endri-javatra nananan'i Charles Darwin sy Marshall Medoff.
Talenta sy fahaiza-manao taloha: Mampanahy ny fomba namoronan'i Medoff, tsy nisy fiofanana ara-tsiansa, namorona fomba fanamboaran-tany hamoronana solika sy plastika azo biodegrades avy amin'ny zavamaniry tsy azo ihodivirana, sary izay tsy vitan'ireo andrim-panjakana siantifika lehibe indrindra eran-tany. Raha tsiahivina, i Medoff dia nampitahaina tamin'ny mpahay siansa mpisava lalana toa an'i Einstein sy Edison.
Toa i Medoff dia nanintona ny fahaizan'ny fiainana taloha, ny an'i Charles Darwin, amin'ny ezaka siantifika.
Ary koa, raha ny fanamarihana, ny fahatakarana ireo paikady mifampitohy, dia talenta izay nozarain'i Darwin sy Medoff.
Fiovam-pirenena: Anglisy i Darwin raha mbola teraka tany Etazonia i Medoff.